Linux kana Windows | Linux Vakapindwa muropa
Linux kana Windows
edumix | | Linux vs. Windows
Ndiwo mubvunzo wekusingaperi, gakava risingaperi (Pakati pezvakanaka nezvakaipa? ndiani anoziva!). Linux kana WindowsNdo izvo izvo vazhinji vanozvibvunza ivo pavanotanga kuwana iyo nyika yeComputer neInternet zvishoma zvishoma mukudzika. Ichokwadi ndechekuti kudzika pasi kwakafanana nekuedza kuita nharo pakati pekuti ndiani ari nani, Real Madrid kana FCBarcelona. Kwete nekuti ivo vaviri vakanaka kwazvo kana mumwe ari nani pane mumwe, kana zvinopesana, asi nekuti vateveri vechikwata vanokuudza kuti yavo ndiyo yakanakisa, uye zvinopesana.
Mune ino kesi chaizvo zvakafanana chinhu chinoitika; yevashandisi ve Linux, iyi ndiyo inonyanya kushanda sisitimu, Windows ndiyo yakaipa, unofanirwa kuigumisa, nezvose izvi mhando yechinhu. Ipo yevashandisi veWindows, sisitimu yekushandisa yeMicrosoft iri nani zvakapetwa kakapetwa, tsvarakadenga, nyore kushandisa, uye Linux yakaipa… gakava iri rakagara riripo uye richaramba riripo.
Linux kana Windows. Iyo nharo yekusingaperi
Chaizvoizvo, kana isu tikanangisa gakava pazvinhu zvehunyanzvi, zvese Linux Chemhondoro Windows vane nharo dzekuzvidzivirira se Operating system referensi, sezvo ese ari maviri akachinja zvakanyanya uye parizvino ari pazvinhu zvakawanda (chengetedzo, mashandiro, kuvimbika, kusimba) kunyange chiri chokwadi zvakare kuti vese vane nharo dzekuratidzira zvinopesana mune mamwe mamiriro.
Icho ichokwadiwo kuti vashandisi vane avhareji ruzivo rweComputer Science vane pamakomputa avo ese ari maviri masisitimu anoshanda aripo pasina dambudziko, uye zvese zvinobatsira zvichienderana nemamiriro ezvinhu uye zvinowirirana zvakakwana uye / kana zvinowirirana. Ehe, isu hatisi kureva vashandisi pro linux (o pro-mahwindokana anti linux (o anti-mahwindo), sezvo izvo chete zvichirarama neako ako anodikanwa mashandiro sisitimu (chero Linux kana Windows) uye usataure kune imwe iyo kuti muviri wavo wese unotanga kuvava uye pane mavara matsvuku paganda ravo kubva kuhurongwa.
Sezvo ichi chiri linux blog, isu tichaedza kutsvaira zvishoma kumba uye isu tichadzivirira zvine musoro Linux pamusoro pazvose.
Munguva yakapfuura, vamwe vashandisi vaisada -kana handina kutya- kushandisa Linux (kana kutombozviedza) nekuti vakaita chikonzero icho yakanga yakanyanya kuomarara mashandiro ekushandisa, kuti vanga vanzwa handizive kuti chii nezve unganidza iyo kernel, kubva raira koni, uye handizive kuti zvimwe zvinhu zvakawanda sei. Parizvino, chikonzero ichocho chiri kuramba chichiitwa, asi hachisisiri chikonzero chine chirevo, sezvo paine migove yakadai Linux mint -Semuyenzaniso- izvo zvinoita basa re famba kubva paWindows uchienda kuLinux, sezvo chimiro chayo chiri chiyeuchidzo cheWindows, uye zvakare haina kupa chero rudzi rwekunetseka kune mushandisi anoziva Linux kekutanga, pane zvinopesana, zvese zviri nyore kwazvo uye zvine mutsindo. Zvikumbiro zvinogona kuiswa nekamwechete kudzvanya, nekuti nekuda kwenzvimbo dzepamutemo hazvidiwe kutsvaga zvekushandisa pamambure, kana kudhawunirodha, kana kumhanyisa zvirongwa zvekumisikidza. Ingo tsvaga ivo mumaneja wekushandisa uye wovaisa nekamwe chete. Icho chikuru chikuru cheLinux.
Nenzira Linux mint Kwave kuri kugoverwa kweLinux kunonyanya kushandiswa nevashandisi kwemwedzi yakati wandei ikozvino, saka zviri pachena kuti vanhu vari kutsvaga nyore uye nyore kushandisa, pasina kurasikirwa nekuvimbika uye kusimba muhurongwa.
Mune izvo zvine musoro Windows isingazombokwikwidze iri mune nyaya yemalayisensi, sezvo sekuziva kwedu, Windows ndeyekuchengetedza software (shamwari yedu yaizotii Richard Stallman) uye unofanirwa kubhadhara kuti ishandiswe, nepo Linux ndeye Mahara Software uye tinogona kuishandisa mahara, pamusoro pekuigadzirisa kana tichida. Uye sezvo anenge munhu wese anoshandisa Windows pamba zvisiri pamutemo (pirate shanduro), Vanofanira kuziva kuti kana vakashandisa Linux vangadai vasina kuita chero chinhu zvisiri pamutemo, kubvira Linux ndeye mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Linux kana Windows
Shandisa zvishoma Linux Mint, uye ichiri girini yakapendwa Ubuntu, ine zvinhu zvakanaka asi bhagi rine Chrome rakaita kuti ndirege
Ubuntu iri kuve yakanyanya kugadziridza uye yakawandisa shanduko dzinogona kunge dzisina kunyatsofungidzirwa.
John Charles Michael Monteear akadaro
Eya, haisiri mibvunzo yese ine mhinduro, uye ichi chiratidzo chinoratidza cheizvozvo. Ndeipi yakanyanya kunaka distro? Zvakanaka, munhu wese anodzivirira waanoshandisa uye anozviona sepamusoro. LinuxMint Ubuntu yakapendwa girini…? Zvakanaka, tichiziva kuti ese masisitimu akavakirwa paDebian, tinogona kutaura kuti Ubuntu iDebian yakapendwa nepepuru uye shava uye kuti Back_Track ndeye Knoppix yakapendwa nhema. Huya pavakomana, yega yega distro yakavakirwa pane imwe uye pakupedzisira ivo vese vari unix vanasikana. Nezve kurwa pakati peGIMP ne Photoshop, zvirinani kuvhura maziso ako uye uzive kuti PS iri pamusoro peGIMP maererano nekushanda, asi isu tinofanirwa kuziva kuti GIMP ndeye mahara, ndanga ndiri yemahara software mushandisi kwemakore mashanu uye ndine handina kumbokwanisa kuzvisunungura kubva kumahwindo, kune zvimwe zvinhu zvichiri kudikanwa.
Pindura kuna Juan Charles Michael Monteear
uye unoiwanepi iyo linux mint ndiyo inonyanya kushandiswa linux distro?
albert, kubva apa: http://distrowatch.com/
Pindura kuna lxa
Muzvokwadi, sarudzo yeanoshanda system inoenderana chete nezvinodiwa nemushandisi ari mubvunzo. Ini pachangu ndinoda Linux uye ini ndinonyatsoshandisa Fedora (Lovelock) uye zvakanaka kwandiri kuti ndiite mabasa angu uyezve kutamba asi ini handizotauri chero munhu kuti achinje kuFedora kana munhu uyu asingade yakakwana uye yemahara system; -)
Mhinduro kumubvunzo Windows, Linux kana Mac Os, ingori iyo os inonyatso kusangana nezvido zvako uye zvishuwo uchishandisa komputa.
Kwaziso uye yakanaka kwazvo chinyorwa !!! ;-)
Ferran, iwo matambudziko aunotaura ndeokune dzimwe nyika (kana anofanira kunge ari) kuLinux. Ini ndashandisa LMDE kwenguva yakareba uye handina kumbobvira ndamboita chero dambudziko, uye ini ndine komputa yatove imwe yekare kune zvayaitakura nhasi. Uye nezveGimp, hazvo, pachave nekukakavadzana nguva dzose, asi Photoshop haina chekugodora, uye kunyangwe mune zvimwe zvinhu uye mashandiro, inhanho imwe kumberi.
Ini ndinofunga ndicho chakanakisa chandakaverenga pamusoro penyaya iyi mumakore gumi apfuura.
Makorokoto angu kumunyori nekutonga kwake kwakanaka uye njere.
Mh, ndine hurombo asi pese pandinoona munhu anoti gimp yakaenzana nefotoshop .. Unoshanda here munyika ye graphic art? nekuti dhizaini inokanda iyo pc mumusoro mako sezvaunomuudza iye kuti anofanira kushanda nayo. Kana kuti taura kuti inkscape iri nani pane illustrator, kana kushingairira zviri nani kupfuura protools kana logic odhiyo. Ngativei vakakomba zvishoma uye kwete zvakanyanya fanika pls
Ini ndagara ndiri W mushandisi uye kwete nekuti ndasarudza, asi nekuti ruzhinji rwemaPC ane iyo OS yakaiswa.
Zvekare zvakare ini ndinoedza kushandisa zvachose linux, ino nguva ne xubuntu 12.04 uye, kune avo vedu vanobva kuW, zvakaoma.
Ini ndinonzwisisa kuti linux yakasiyana neW, asi izvo zvandisinganzwisise ndosaka vaifanira kuzviomesera isu isu varikuuya ku linux. Fungidzira ipapo kuti zvichave zvakaoma sei kumarudzi asina kunyatsonzwisisa chero chinhu cheW ...
Chii chinonetsa varombo vasingazive kuti isu tinofanirwa kuenda google zvakanyanya mukutarisana neese matambudziko anouya nenzira ye linux kuzvikudza kwatinoitwa ne "linuxers" uye, kunyanya, nekuramba kwakarongeka kwematambudziko nezvinetso izvo distros zviripo. Ehezve, Linux ine zvinhu chiuru zvinoenda nayo zvine chekuita neW, asi hazvizopenya pachezvazvo kana bato reLinux Taliban rikavhara zvakanyanya uye nekuwedzera mune yavo isingakundike mageto.
Rangarira kuti havazi isu tese tinoda (uye / kana hatina nguva yeku) kuongorora, kuongorora, kupedzisa kuyedza-kukanganisa kutenderera, nezvimwe.
Ndinoomerera: iyo linux yakasiyana haifanire kureva kuti zvakaoma.
Uye nezve iyo yakanakisa "linuxera", HANDINA kuwana forum kana dzidziso inotidzidzisa kubva pakutanga uye nyore kushandisa linux. Chinhu chinogara chichionekwa chinokusiya kunze uye, nekudaro, hauchadi kuramba uchiedza kunzwisisa.
Ini ndinofunga kuti vanhu vane degree rangu rekutambudzika ne linux vanozofarira iri nyore kwazvo kushandisa distro uye kuti vanogadzira vanofunga kuti vazhinji vevashandisi vepc vanoshandisa chete W. Ini handivabvunze kuti vagadzire W kubva ku linux, asi zvirizvo Fungisisa kusvika kune OS.
Ini ndinofunga kuti zvichitevera chirevo ichi, Linux yaizonyanya kuwedzera kuitira kuti vasingagoni kuverenga nekunyora vanobva kuW vagonakidzwa nerusununguko rwemahara OS.
Ini ndinotenda kuti mumahofisi eruzhinji neakazvimiririra ivo vanofanirwa kunge vaine bhutsu mbiri papc yavo, vachibvumira mushandisi kusarudza LINUX kana Window $.
Ipfungwa yakapusa inofanirwa kutongwa.
Kune avo vanozviona zvakaoma, zvinogoneka sei? Iko kuomarara kuri kupi?
Chokwadi ndechekuti handisi kukunzwisisa.
Hazvina kuomarara kutsvaga chirongwa apo Kristu akarasa shangu dzake (izvo zvinogona kukutorera maawa matatu kuti utore uye rar ine password) uyezve kuti woisa keygen kana registry kana kuivharidzira ne firewall kuitira kuti haina kubatana etc nezvimwe ...?
Izvo hazvisi zvekuita zviri nani kana zvakanyanya, ndezve izvo zvandinoraira, kana ndikaisa chimwe chinhu hachiuye nemabhurawuza mabara akaisirwa pasina mvumo kana adware yerudzi rupi zvarwo, ini handidi kuti uchinje windows ye linux, ini usatokukurudzire kune izvo zvaunozviedza, kana iwe usiri kufarira chero chinhu, mangwana zuva richabuda zvakadaro.
Asi mumwe munhu anondiudza kuti xubuntu 12.04 yakaoma zvakafanana nekutaura kuti zvinonetsa kufona nefoni.
Dambudziko nderekuti ndewe monopoly senge chero imwe, uye nekutenda kuLinux, vanhu vasina zviwanikwa zvihombe senge Microsoft vachakwanisa kupa basa ravo uye vanogona kuenzana kana kuve nani pane vemakwikwi.
Kuti ndipe muenzaniso, dai chete avo vaive nemari yakawanda vaigona kudzidza kuimba, tarenda rakawanda raizorasika, kuisa izvi kumapazi ese ini ndinofunga chokwadi ndechekuti zvinotikodzera.
Zvino mubvunzo wemamirioni emadhora ...
Kekutanga iwe pawakaona pc, hauna kuiona yakaoma here?
Ini ndinofunga iwe haungazvarwe wakadzidziswa kare.
Ini ndinofunga mutsauko uripakati pevanhu vasina basa nemashandiro aro chero bedzi richishanda uye neavo vanoshamisika kuti rinoshanda sei.
Ipapo iwe uchauya kwandiri ne roll, ndeyekuti ini handikwanise kutamba mitambo yazvino nezvimwe etc etc….
Iyo console inoraira, (chii chinoraira?)
Nekuti iri linux unofanirwa kuitakura iine console yakavhurwa?
Ini handizive nezvako asi ini handivhure kuti ishandiswe mazuva ese, chete kana ini ndisinganzwe sekuvhura software centre (iri nyore kwazvo) uye ini ndoda kuisa gimp, semuenzaniso ndinoinyora mu console uye mumasekondi mashoma ndinayo, asi izvo hazvisi izvo hazvisi odyssey kana chero chinhu chakadai, asi zvakanaka kana iwe uchizviona saizvozvo, saka hapana, kuenderera nema windows, nei uchimomesa, handiti?
Uye kana zvasvika kune vatyairi, ndapota usazvitaura.
Zvinogoneka sei kuti mawindo ese akazara mukubwinya kwawo nekubwinya kwake asingazive kiredhiti kadhi kana iyo wifi usb kana yakagadzirirwa windows? , asi kwete windows 8, kwete yeVista uye 95.
Wese munhu akasununguka kushandisa iyo yaanoda zvakanyanya.
Ndekupi kwaunonyanya kugadzikana?
Pindura kuna Diablo
Carlo Vincent akadaro
Mhoro Diablo, ndinofunga yanga iri mhinduro yakabudirira pane dzese: shandisa iyo yaunoda kwazvo kuita rimwe basa.
Nekudaro, ini ndoda kunyora akati wandei manotsi; Iwe unogara uchitaura nezveUbuntu sekunge ndiyo yega distro uye chokwadi ndechekuti kune zvinopfuura chiuru zvinotenderera uye mune mazhinji acho uchiri kuda kuvhura iyo koni kuti uite zvimwe zvinhu; kazhinji, kugadzirisa rimwe dambudziko senge kuzivikanwa kweiyo Backlight kukosha kuitira kuti kupenya kudzora kwewelaptop yangu kundiziva, iyo Ubuntu haina kundiziva ini kubva pane yekupedzisira vhezheni.
Kune rimwe divi, dambudziko remutyairi haisi mhosva yeWindows kana Linux, asi yemugadziri. Kune mamwe majaira hapana madhiraivha eWindows 8, asi yeLinux, hapana madhiraivha emazhinji, akawanda madhizaini, atisiri kuzokurukura izvozvi, nekuti ini ndinodzokorora, iko kukanganisa hakuna mumwe kunze kwevagadziri.
Vanhu vanoda kuti zvese zvishande kekutanga, sezvazvinofanira kuita. Vazhinji havafarire kuti sei uye nei, asi kungoti zvinoshanda. Kune vamwe iri Linux uye kune vakawanda (zvinosuwisa) iWindows, kune vamwe Mac OSX.
Pindura Carlo Vincente
stitch yehure akadaro
Kune windows angu mutoro wandinofanira kushandisa nechisimba nekuti handikwanise kuisa iTunes paLinux mint. Kunyangwe newaini, kana ne playonlinux kana chero chinhu (unogona kundidana kuti clumsy: p) uye ndizvo zvandinoita. Ndine windows yekushandisa zvega zveTunes nezvose zviri mint. Kana iri gakava remastros, ini ndangove mushandisi weUbuntu neLinux mint. Wechipiri ini ndakasangana naye gore rapfuura uye kubvira ipapo ndakamusarudzira. Iyo nyowani ubuntu desktop haina kunyatsondikurudzira uye ini ndasara neanoyemurika murume.
Zvinosuruvarisa asi ichokwadi kuvapo kwekutya muvanhu kana uchitaura nezveLinux. Asi zvinonyanya kutyisa kuisa anoshanda system uye kukusiya iwe nemadriver akarembera.
Raibhurari yemahara yekurodha mimhanzi yemahara zviri pamutemo
Dhawunirodha mimhanzi yemahara naAironux